Iwu nzuzo - Bayu The Label
Ejikọtara iwu nzuzo a iji mee ka ndị na-echegbu onwe ha banyere otú ha si eji 'Ozi Onye Na-ahụ Anya' (PII) mee ihe n'ịntanetị. PII, dịka akọwapụtara na iwu nzuzo na US na nchedo ozi, bụ ozi nwere ike iji ya n'onwe ya ma ọ bụ na ozi ndị ọzọ iji chọpụta, kọntaktị, ma ọ bụ chọta otu onye, ​​ma ọ bụ iji mata onye ọ bụla n'ime ya. Biko gụọ iwu nzuzo anyị nke ọma iji nweta nghọta doro anya maka otu anyị si anakọta, jiri, chebe ma ọ bụ na-ejide onwe gị Ozi Ịmata Ihe dịka anyị na ebe nrụọrụ weebụ anyị.
Kedu ozi onwe onye anyị na-anakọta n'aka ndị na-aga na blog anyị, ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ ngwa anyị?
Mgbe ị na-enye ma ọ bụ debanye aha na saịtị anyị, dịka o kwesiri, a nwere ike ịjụ gị ka ị tinye aha gị, adreesị ozi-e, adreesị ozi-e, nọmba ekwentị ma ọ bụ nkọwa ndị ọzọ iji nyere gị aka ahụmahụ gị.
Anyị na-anakọta ozi n'aka gị mgbe ị debere iwu ma ọ bụ tinye ozi na saịtị anyị.
Olee otú anyị na-eji ozi gị?
Anyị nwere ike iji ozi anyị na-anakọta n'aka gị mgbe ị debanyere aha, mee ka ịzụta, debanye maka akwụkwọ akụkọ anyị, zaghachi na nyocha ma ọ bụ nkwukọrịta ahịa, sọfụ weebụsaịtị, ma ọ bụ jiri ụfọdụ saịtị saịtị ndị ọzọ:
• Iji mee ngwa ahia azụmahịa gị.
Anyị anaghị eji nlezianya ịgụ na / ma ọ bụ nyochaa ụkpụrụ PCI.
Anyị na-anakọta ozi kaadị akwụmụgwọ, mana amaghị na ịchọrọ nyocha PCI achọrọ ugbu a.
Anyị na-eji nlegharị anya Malware.
Ozi nkeonwe gị dị n'azụ netwọk echekwara ma enwere ike ịnweta ya site na ọnụ ọgụgụ dị ole na ole nke ndị mmadụ nwere ikike ohere ịnweta ohere dịka usoro ndị ahụ, ma achọrọ ka ịchekwa ozi ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, ihe niile echetara / ozi ego ị na-enye bụ ezoro ezo site na teknụzụ Secure Socket Layer (SSL).
Anyị na-eme ihe dị iche iche nchedo mgbe onye ọrụ nyere iwu iji chebe nchekwa nke ozi nkeonwe gị.
Maka nkwekọrịta gị, anyị nwere ike ịchekwa ozi kaadị akwụmụgwọ gị maka ihe karịrị ụbọchị 60 iji mee ngwa ngwa n'ọdịnihu, ma mee ka usoro ịgba ụgwọ rụọ ọrụ.
Anyị na-eji "kuki"?
Ee. Kuki bụ obere faịlụ na saịtị ma ọ bụ ndị na-ahụ maka ọrụ na-enyefe na draịvụ ike kọmputa gị site na ntanetị weebụ gị (ọ bụrụ na ikwe ka) nke na-enyere usoro saịtị ahụ ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọrụ aka ịmata ihe nchọgharị gị ma jide ma cheta ụfọdụ ozi. Dịka ọmụmaatụ, anyị na-eji kuki enyere anyị aka icheta ma dezie ihe ndị dị na ụlọ ahịa gị. A na-ejikwa ha iji nyere anyị aka ịghọta ihe ịchọrọ mmasị dabere na ọrụ saịtị ma ọ bụ nke ugbu a, nke na-enyere anyị aka ịnye gị ọrụ dị mma. Anyị na-ejikwa kuki enyere anyị aka ikpokọta data gbasara okporo ụzọ saịtị na ebe nrụọrụ weebụ ka anyị wee nwee ike inye ezigbo ahụmịhe na ngwaọrụ n'ọdịnihu.
• Nyere cheta ma dezie ihe ndị dị na ụlọ ahịa.
• Mara ma chekwaa mmasị onye ọrụ maka nleta n'ọdịnihu.
• Debe mgbasa ozi.
• Nchịkọta data nchịkọta banyere okporo ụzọ saịtị na saịtị mmekọrịta iji nye ọhụụ na ọrụ dị iche iche na ntanetị n'ọdịnihu. Anyị nwekwara ike iji ọrụ ndị ọzọ tụkwasịrị obi na-egwu ozi a na nnọchite anyị.
Ị nwere ike ịhọrọ ka kọmputa gị dọọ aka aka ná ntị oge ọ bụla a na-eziga kuki, ma ọ bụ ị nwere ike ịhọrọ gbanyụọ kuki niile. Ị na-eme nke a site na mwube ihe nchọgharị gị. Ebe ọ bụ na nchọgharị dị obere, lee Nchọpụta Enyemaka nke nchọgharị gị iji mụta ụzọ ziri ezi iji gbanwee kuki gị.
Ọ bụrụ na ị gbanyụọ kuki, ụfọdụ njirimara ga-enwe nkwarụ. Ọ gaghị emetụta ahụmahụ onye ọrụ nke mere ka saịtị gị nwekwuo ọganihu ma ghara ịrụ ọrụ nke ọma.
Otú ọ dị, ị ka ga-enwe ike itinye iwu.
Anyị anaghị ere, ahia, ma ọ bụ na-agafe na mpụga gị Ozi Onye Nwee Ike Ịmata ma ọ bụrụ na anyị nye ndị ọrụ ọrụ ọkwa n'ihu. Nke a anaghị agụnye ndị mmekọ mmekọ weebụ na ndị ọzọ ndị na-enyere anyị aka n'ịrụ ọrụ anyị na ebe nrụọrụ weebụ anyị, na-eduzi azụmahịa anyị, ma ọ bụ na-ejere ndị ọrụ anyị ọrụ, ọ bụrụhaala na ndị ahụ kwenyere na ịchekwa ozi a. Anyị nwekwara ike ịhapụ ozi mgbe a tọhapụrụ ya kwesịrị ekwesị iji rubere iwu ahụ isi, mee ka iwu anyị nwee, ma ọ bụ chebe anyị ma ọ bụ ikike ndị ọzọ, ihe onwunwe ma ọ bụ nchekwa.
Otú ọ dị, enwere ike ịnye ozi ndị ọbịa na-abụghị onye onwe gị na ndị ọzọ maka ahịa, mgbasa ozi, ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ.
Mgbe ụfọdụ, na nghọta anyị, anyị nwere ike ịgụnye ma ọ bụ nye ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ na weebụsaịtị anyị. Ebe ndị a atọ nwere ụkpụrụ nzuzo nzuzo na nke onwe. Ya mere, anyị enweghị ọrụ ma ọ bụ ọrụ maka ọdịnaya na ọrụ nke saịtị ndị a jikọtara. Ka o sina dị, anyị na-achọ ichedo iguzosi ike n'ezi ihe nke saịtị anyị ma nabata nzaghachi ọ bụla banyere saịtị ndị a.
Enwere ike ichikota ozi mgbasa ozi nke Google site na Nzuzo Mgbasa Ozi Google. A na-etinye ha n'ọnọdụ iji nye ezigbo ahụmahụ maka ndị ọrụ. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en
Google, dịka onye na-ere ahịa nke atọ, na-eji kuki iji nye mgbasa ozi na saịtị anyị. Ojiji nke Google nke kuki DART na-enyere ya aka iji mgbasa ozi nye ndị ọrụ anyị dabere na nleta ndị gara aga na saịtị anyị yana saịtị ndị ọzọ na Ịntanetị. Ndị ọrụ nwere ike ịpụ na ntanetị DART site na ịga na iwu nzuzo Google Ad na Content Network.
• Nyochaa na Google AdSense
• Ngosipụta Google gosipụta Mgbasa Ozi
• Mmetụta ọgụgụ na Mmasị na-ekwu
Anyị, yana ndị na-ere ndị ọzọ dị ka Google na-eji kuki ndị ọzọ (dịka kuki nchịkọta Google) na kuki ndị ọzọ (dịka cookie DoubleClick) ma ọ bụ ndị ọzọ njirimara ndị ọzọ iji chịkọta data gbasara mmekọrịta onye ọrụ na ihe ngosi na ọrụ ọrụ mgbasa ozi ndị ọzọ ka ha na-akọ na weebụsaịtị anyị.
Ndị ọrụ nwere ike ịtọ mmasị maka otu Google si akpọsa gị na iji Google Ad Settings peeji nke. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịpụpụ site na ịga na Network Advertising Initiative Opt Out page ma ọ bụ site na iji nchịkọta Google Analytics Out Out Browser.
COPPA (Iwu ụmụaka Nchedo Nzuzo Online)
N'ihe gbasara nchịkọta ozi nkeonwe site na ụmụaka nọ n'okpuru afọ 13, Usoro Ndobe Nzuzo Ụmụaka (COPPA) na-eme ka ndị nne na nna chịkwaa. Ụlọ ọrụ ahia ahia, United States 'protection agency, na-akwado iwu COPPA, nke na-akọwa ihe ndị ọrụ nke weebụsaịtị na ọrụ ntanetị ga-eme iji kpuchie ụmụaka na nchekwa na ntanetị.
Anyị anaghị enye ndị na-erubeghị afọ 13 ahịa.
Iwu CAN-SPAM bụ iwu nke na-esetịpụrụ iwu maka ozi azụmahịa, na-edozi mkpa maka ozi azụmahịa, na-enye ndị nnata ikike iji zipu ozi ịntanetị na ezigara ha, na-ezipụtakwa ntaramahụhụ siri ike maka mmebi.
Anyị na-anakọta ozi adreesị ozi-e iji:
• Zipu ozi, zaa ajụjụ, na / ma ọ bụ arịrịọ ndị ọzọ ma ọ bụ ajụjụ
• Iwu usoro na iziga ozi na mmelite gbasara iwu.
• Na-ezitere gị ozi ndị ọzọ metụtara ngwaahịa gị na / ma ọ bụ ọrụ gị
• Ahịa na listi nzipu ozi anyị ma ọ bụ nọgidere na-ezipụ ndị ahịa anyị ozi ịntanetị mgbe azụmahịa mbụ ahụ gasịrị.
Iji kwekọọ na CANSPAM, anyị kwetara ihe ndị a:
• Ọ bụghị iji okwu ụgha ma ọ bụ na-eduhie eduhie ma ọ bụ adreesị email.
• Chọpụta ozi dịka mgbasa ozi n'ụzọ ụfọdụ.
• Sọpụrụ ịpụpụ / wepu aha ngwa ngwa.
• Nye ndị ọrụ ka ha wepu aha site na iji njikọ na ala nke email ọ bụla.
Ọ bụrụ na oge ọ bụla ịchọrọ ịwepụ aha gị na ịnweta ozi ịntanetị n'ọdịnihu, ị nwere ike izipu anyị ozi
• Soro ntuziaka na ala nke email ọ bụla.
anyị ga-ewepụ gị ozugbo AKWỤKWỌ NDỊ.
Ọ bụrụ na e nwere ajụjụ ọ bụla gbasara iwu nzuzo a, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị site na iji ozi dị n'okpuru ebe a.
36 (C 019) nke Binckhorstlaan
Nchịkọta Ikpeazụ na 2017-01-18